Inqaku leRedmi 8 Pro: Amaxabiso efowuni avuza eYurophu | I-Androidsis
Ukucoca amaxabiso kwiRedmi Qaphela 8 Pro eYurophu
Kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo, iifowuni ezintsha eziphakathi kuRedmi zatyhilwa ngokusemthethweni. Kuluhlu sikwazile ukwazi iRedmi Qaphela 8 Pro ukusuka brand Chinese, Ukucaciswa kabani esele sikuxelele. Ezi fowuni zimbini azikafiki eYurophu, nangona kulindeleke ukuba zenze njalo kwiiveki nje ezimbalwa njengoko kusaziwa njalo.
Into esingazukuyilinda yile ukwazi amaxabiso eRedmi Qaphela 8 Pro eYurophu. Amaxabiso acingelwayo ezi nguqulelo zimbini zolu hlobo lwaphakathi kwegama lase China sele evuziwe. Asazi ukuba ziyinyani, kodwa ubuncinci sinokufumana umbono wokuba zingabiza malini.
Inqaku leRedmi 8 Pro inokumiliselwa kwiinguqulelo ezimbini ze-RAM kunye nokugcinwa, njengoko kubonisiwe kwintetho. Inguqulelo enye ene-4/64 GB kunye nenye ene-6/128 GB yokugcina. Amaxabiso ezi nguqulelo zimbini zefowuni avunyiwe kule meko.
Kwimeko yenguqulo yefowuni ene-4/64 GB, iya kuphehlelelwa eYurophu ngexabiso lama-euro angama-259. Ngelixa imodeli eza kuthi ifike nge-6/128 GB yokugcina, iya kuba namaxabiso kwi-289 euros. Ngokubanzi, zingaphezulu kwamaxabiso amkelekileyo kwinqanaba eliphakathi eliphakathi njengalo.
Nangona okwangoku asazi ukuba aya kuba ngamaxabiso okugqibela ale Redmi Qaphela 8 Pro. Inkampani akakaqinisekisi ukuza kuthi ga ngoku malunga nokumiliselwa yale fowuni, kunye nemodeli eqhelekileyo, eYurophu. Nokuba ngumhla wokukhutshwa kwayo okanye amaxabiso ayo ayinto eyaziwayo ngoku.
Ngaba ngamaxabiso efowuni, ayizukuba yinto engaqhelekanga, kodwa kuya kufuneka silinde isiqinisekiso esongezelelweyo. Ke sinokwazi ukuba olu luhlu luphakathi lweRedmi luza kuqaliswa kwiinguqulelo zalo ezimbini eSpain nangala maxabiso. Kwiiveki ezimbalwa kuya kufuneka ucace ngakumbi malunga nokuqaliswa kwayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Ukucoca amaxabiso kwiRedmi Qaphela 8 Pro eYurophu
Iirekhodi zokuqhekeza i-Galaxy Note 10 eMzantsi Korea
Ifowuni yoMsebenzi: Iselfowuni sele inomhla wokukhutshwa kwi-Android